‘काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि एउटा शक्ति निर्माण हुँदैछ, त्यो हो जनकपुर’ | Ratopati
‘काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि एउटा शक्ति निर्माण हुँदैछ, त्यो हो जनकपुर’
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ६, २०७५ chat_bubble_outline0
मधेस १२ वर्षदेखि आन्दोलित छ । मधेसवादी दलले उठाएको माग पनि यथावत रूपमा उठिरहेको छ । केन्द्रीय सरकार भन्छ, राजनीतिक समस्या समाधान भइसक्यो, अब आर्थिक समृद्धिको कुरामा लागौँ । तर मधेसवादी दल भन्छ– राजनीतिक समस्या यथावत छ । त्यो समाधान नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हुनसक्दैन । दुई शक्तिको फरक फरक कुरा आइरहेको बेला तराई मधेसको राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक रूपमा अध्ययन गरेका पत्रकार चन्द्रकिशोरले यसको बारेमा के भन्छन्, प्रस्तुत छ उनीसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेका कुराकानीः
मधेस आन्दोलन भएको १२ वर्ष पूरा भयो । यो अवधिलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
–मधेस अझै जागरुक छ । पहिलो मधेस आन्दोलनदेखि तेस्रो मधेस आन्दोलन, तेस्रो मधेस आन्दोलनदेखि सत्तामा मधेसी दलको सहभागीतासम्म पनि मधेसी जनता जागरुक खबरदारीको अवस्थामा भेटिन्छ । यति लामो समयसम्म आन्दोलनको मनोविज्ञानमा बसिराख्नु आफैमा अनौठो र आश्चर्यको कुरा हो । तराई मधेसको गाउँ देहातमा त्यो मैले पाएको छु । जनतामा आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतना अझै कायमै छ । मधेस आन्दोलनले उठान गरेका, मधेसको भूमिमा मधेसीद्वारा मधेस आन्दोलन गरिए तापनि त्यो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन थियो । राष्ट्रिय रूपमा राज्य पुनःसंरचनाको जुन अवस्था थियो त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्यो । अर्थात देशलाई नै नयाँ दिशा दिन सफल भएको छ । त्यो आन्दोलनले सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्न सफल भयो । भलै मधेसीहरूले पाउनुपर्ने कुरा पाएनन् । समावेशीताको सवाल, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, थोरबहुत भएपनि नागरिकताका सवाल, त्योभन्दा बढी पहिचानका कुरालाई आन्दोलनले स्वीकार गर्न बाध्य बनायो । मधेस जागरणपछि मधेसका स्थायी सत्ताहरूले आफूलाई सङ्गठित रूपमा प्रतिरोधमा उभ्याएका छन् । अहिले पनि त्यो अवस्थामा कायम छन् । नेपालका कुनै कुनाबाट भएको आन्दोलनबाट स्थायी सत्ताको शक्ति सङ्कुचन हुने अवस्था थिएन । तर मधेसको कोणबाट गरेको आन्दोलनबाट स्थायी सत्ताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे । त्यही कारणले देशका मिडिया पनि यो लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा देखापरे ।
त्यस्तै, मधेसी र पहाडी दुई मानक देखापर्यो । जनकपुरले जुन तरिकाले सोच्छ, त्योभन्दा फरक तरिकाले काठमाडौँले सोच्छ । पछिल्ला आन्दोलनहरुले काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि एउटा शक्ति निर्माण हुँदैछ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यो हो, जनकपुर ।
बाँकी प्रदेशका राजधानी भए पनि त्यहाँ शक्ति छैन । जनकपुर भने नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउँदैछ । त्यसैले चीनका राजदूत पनि जनकपुर पुग्नुहुन्छ र भारतका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि जनकपुर पुग्नुहुन्छ । नेपालमा अरू कुनै शक्ति केन्द्र छ भने त्यो जनकपुर हो ।
यति शक्तिशाली हुँदा हुँदै पनि मधेसले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
–नेपालमा तीनटा जनसङ्ख्या महत्त्वपूर्ण छन् । त्यो हो– मधेसी, जनजाति र खास आर्य । मधेसले आफ्नो कुरा गर्यो, आफ्नो भूमिमा लड्यो । केही समयका लागि काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्यो । तर बाँकीका समुदायसँग जुन प्रकारका संवाद गर्नुपथ्र्यो, संवादका कथ्य र तथ्यहरू पस्कनुपथ्र्यो । जुन व्यवहार देखाउनुपथ्र्यो, त्यो देखाउन सकेन । पहाडी दलित, जनजाति जसको लडाइँ खस आर्यसँग थियो उनीहरू पनि मधेसप्रति आशङ्का राखे । उनीहरूले मधेसलाई विश्वास गर्न सकेन । यसको कारण के हो भने पहिलो मधेस आन्दोलनपछि र दोस्रो मधेस आन्दोलनका बेला तराईबाट जसरी पहाडी मूलका व्यक्ति धपाइए, त्यसले पनि मधेसप्रति एउटा अविश्वास जन्मायो । त्यसका लागि मधेसवादी दलका नेताहरूले विश्वासका वातावरण बनाउनुपथ्र्यो तर त्यसमा उनीहरू चुके ।
हामी खाली दिल्लीको भरपर्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अरू शक्ति पनि छन् । उनीहरुसँग आफ्नो दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न सकेनन् । नेताहरूले पनि आपसमा कार्यगत एकता गर्न सकेनन् । नेताहरूलाई जस लिने आ–आफ्नै लिने होड थियो ।
अर्को कुरा, मधेसका नेताहरू सार्वजनिक मन्तव्य दिनमा निपुण छन् । तर नेगोसेसन गर्नमा, वार्ता गर्नमा कमजोर छन् । उहाँहरू सार्वजनिकरुपमा जुन पोजिसन देखाउनुहुन्छ, त्यही पोजिसन वार्ताको बन्द कोठामा पनि देखाउनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूत्र के हो भने माग एउटा कुरा हुन्छ तर बटमलाइन अर्को कुरा हुन्छ । मधेसले के दाबी गर्ने हो र बटमलाइन के हो छुट्याउनै सकेन । यसले पनि अप्ठ्यारो पर्यो ।
अर्कोतर्फ मधेसका नागरिक समाज भन्नेहरू छन्, उनीहरूले पनि समयमा केही गर्न सकेनन् । पहिलो मधेस आन्दोलनको बेला मधेसमा दुईवटा प्रदेश पाउने अवस्था थियो तर मधेसका नागरिक समाजले त्यसको विरोध गर्दियो । मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू हच्किए । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा अर्को प्रदेश भइदिएको भए सङ्घीयताको अभ्यास अझ बलियो हुन्थ्यो । त्यसमा मधेसका नागरिक समाज र थिङ्क ट्याङ्क चुक्यो । त्यसकारण मधेसका जनताले जति आहुती दिए, त्यो अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन् ।
अर्को कुरा, हामी खाली दिल्लीको भरपर्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अरू शक्ति पनि छन् । उनीहरुसँग आफ्नो दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न सकेनन् । नेताहरूले पनि आपसमा कार्यगत एकता गर्न सकेनन् । नेताहरूलाई जस लिने आ–आफ्नै लिने होड थियो ।
मधेसका मुद्दा सेटल हुन नसकेको विभिन्न कारण देखाउनुभयो । राजनीतिक रूपमा कहाँ कमजोर देखिए मधेस ?
–मधेसवादी दलका नेताहरूले राजनीतिक रूपमा वर्तामा नेगोसिएसन गर्न नसकेकै हो । संस्थापक शक्तिले हामीबीचको फुटलाई हामीबीचको शक्तिलाई, हामीबीचको विमतीलाई, हामीबीचको महत्त्वकाङ्क्षालाई राम्रोसँग जान्न पाए र त्यसमा खेल्न पाए । आन्दोलन एउटा कुरा हुन्छ, वार्ता एउटा कुरा हुन्छ । संस्थापक पक्षले वार्ता गर्न आउनेहरू बीचमा एकता कतिको छ भन्ने हेर्छ । उनीहरूको बीचमा के–के विमति छन्, उनीहरूको बीचमा महत्त्वकाङ्क्षा कति छ, आफैमा स्पष्ट छन् कि छैनन् जस्ता पक्ष अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू पनि संविधान संशोधन गर्ने कि पुनःलेखन गर्ने, चुनाव गएर संविधान संशोधन गराउने हो कि चुनावमा नगएर संविधान संशोधन गराउने कुरामा पनि स्पष्ट थिएनन् । त्यसले गर्दा सत्तापक्षले खेल्न पाए ।
अहिले नै एउटा शक्ति सरकारमा छ अर्को शक्ति बाहिर छ । सरकारमा भएकाले पनि प्रेमपत्र (ज्ञापनपत्र) बुझाउँछ । सरकारबाहिर रहेकाले पनि प्रेमपत्र बुझाउँछ । तर प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ – ‘औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गरौँला ।’ सरकारमा रहनुभएका उपेन्द्र यादवले बोल्नुपर्यो नि, कि औचित्य छैन भने किन प्रेमपत्र बुझाउनुभएको थियो ? राजेन्द्र महतोले पनि यस विषयमा बोल्नुपर्यो । सत्तापक्षले खेल्ने मौका पाएको यस्ता थुप्रै घटना छन् ।
मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दलहरू थुप्रै पटक सरकारमा गए । अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै गरिरहेका छन् तर मधेस आन्दोलनमा सहादत दिएका परिवारको असन्तुष्टि जहाँको त्यहीँ छ । उनीहरुको माग किन सम्बोधन भइरहेको छैन ?
–यो मधेसको कुरा मात्र होइन देशमै जति सहिद भए, घाइते भए, पीडित भए ती सबैको अवस्था त्यस्तै छन् । सरकारका तर्फबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ । चाहे त्यो मधेसको होस् वा पहाडको होस् । माओवादी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारलाई त्यो पार्टीले राम्रो हेरचाह गरे पनि त्यसबाहेकका सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ताहरूको कुनै वास्ता छैन । सबैको गुनासो एउटै खालको छ ।
सहिदको नाममा राज्यले विभिन्न गतिविधि गरेको पाइन्छ । कसैको नाममा ट्रस्ट, कसैको नाममा अस्पताल, कसैको नाममा सडक, कसैको नाममा प्रतिष्ठान खोलेको छ । तर मधेस सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको देखिँदैन किन ?
–होइन, मधेस सरकार गठन भएको बल्ल एघार महिना भएको छ । त्यो सरकारले पनि मधेसी सहिद, घाइते, अपाङ्गहरूको बारेमा केही न केही गर्ने सोचिरहेको छ । योजनाहरू बनाउँदैछन् । उसको सामथ्र्य र सीमा छ, त्यसका आधारमा उनीहरूले केही न केही गर्दैछन् ।
मूलभूत मुद्दामा सबै एकबद्ध छन् तर ती मुद्दालाई कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्ने कुरामा मधेस राजनीतिमा द्विविधा छ ।
१२ वर्ष निरन्तर सङ्घर्ष गर्दा प्राप्त नभएको उपलब्धिलाई प्राप्त गर्न अझै कति समयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ?
–समय त तोकेर भन्न सकिँदैन । तर राम्रो पक्ष के हो भने पहिलो मधेस आन्दोलनका बेला थारुहरूले मधेसी होइनौँ भन्थे । मुस्लिमले मधेसी होइनौँ भन्थे, दलितले मधेसी होइनौँ भन्थे । तर अहिले सबै यसलाई मान्न तयार भएका छन् । एउटा अम्ब्रेलाका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । काठमाडौँसँगको सङ्घर्षमा साझा रूपमा जानुपर्छ भन्ने सोच बनेको छ । सन्थालहरूलाई पनि हामीले अलग–अलग रहेर केही पाउन सक्दैनौँ भन्ने लागेको छ । यो बुझाइले निश्चित रूपमा सार्थक सङ्घीयताका लागि, देश जोड्ने सङ्घीयताका लागि चाँडै नै केन्द्रमाथि दबाब पर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मधेसले देश जोड्ने सङ्घीयता खोजेको हो ।
मधेसवादी दलका नेताहरू दीर्घकालीन रूपमा राजनीति गर्न मुद्दालाई जीवित राख्न चाहन्छन्, जसले गर्दा त्यो सेटल भइरहेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । कि माग पूरा गराउन उनीहरूको शक्ति पुगिरहेको छैन ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
–वर्चस्वशाली शक्तिले आफ्नो हातमा आएको शक्तिलाई गुम्न दिन चाहँदैनन् । त्यो ठूलो समस्या हो । त्यसलाई घेराबन्दी कसरी पार्न सकिन्छ भने बहुसङ्ख्यक जनतालाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेको भए, आफ्ना कुरा बताउन सकेको भए वर्चस्वशाली समुदायमाथि दबाब पथ्र्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । त्यो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ । सीधा कुरा भन्ने हो भने राज्यसत्तामाथि उनीहरूको दबाब पुगिरहेको छैन । मधेसले आफ्ना पक्षका कुरा हिमाललाई भन्नुपर्यो, पहाडलाई भन्नुपर्यो । आदिवासी जनजातिलाई भन्नुपथ्र्यो । पहाडले मधेसको बारेमा विभिन्न लाञ्छनाहरू लगाएको छ । त्यो भत्काउन सकिएन भने राज्यसत्तामाथि दबाब पर्न सक्दैन । पहाडमा भूकम्प जाँदा मधेसले काँध थप्यो तर मधेसमा त्यत्रो मान्छे मर्दा पहाड किन रोएन किन बोलेन ? यो कुरा मधेसले सोध्नुपर्यो । पहाडलाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो । पहाडलाई बुझाउनु पर्यो ।
मधेसवादी दलका नेता अझै पनि आफ्नो मुद्दामा स्पष्ट छैनन् भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?
–मूलभूत मुद्दामा सबै एकबद्ध छन् तर ती मुद्दालाई कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्ने कुरामा मधेस राजनीतिमा द्विविधा छ । उपेन्द्रजीले पुनर्लेखन भन्नुहुन्छ । राजपा नेपालवालाहरूले संशोधन भन्नुहुन्छ । चुनावमा जाने सवालमा, रेशम चौधरीको रिहाइका सवालमा, सत्तालाई बुझ्ने सवालमा उनीहरूको बीचमा फरक–फरक कुरा छन् । कता–कता क्रेडिट लिनका लागि, आफूलाई प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखाउनका लागि फरक–फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत भएका पनि छन् । तर, काठमाडौँभन्दा प्रदेशहरू बलियो हुनुपर्छ, समावेशीताको संरचना बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजपा र फोरमको कुरा एउटै एउटै हो ।
राज्यले पूरा गर्नैपर्ने र ती पूरा नगरे देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने माग के–के हुन् ?
–प्रदेशलाई न्यायोचित अधिकार दिनुपर्छ । नेकपाका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि अनुभव गरेका कुरा हुन् । यो लालबाबुजीले मात्र मागेको कुरा होइन ।
भारत, चीन वा अमेरिका : गठबन्धनमा लाग्दा कसैले पनि हामीलाई बचाउन सक्दैन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अँध्यारो इतिहास
स्वस्थानी : अमर प्रेमको दस्तावेज कि विभेदकारी सांस्कृतिक हतियार ?
...यदि त्यसोभए अर्को माओवादी जन्मिन्छ र
मापसे गर्नेको लाइसेन्समा प्वाल, ज्यान मार्नेलाई छुट !
अझै रोकिएन मिर्गौला तस्करी, पुरानै दलाल झन् झन् सक्रिय (लेनदेनको भिडियोसहित)
राजावादी उम्मेदवारलाई प्रदेश १ मा ६६ मतभार बोनस, कसले दियो मत ?
सनराइज बैंकको १३ औं विस्तारित काउन्टर धनकुटामा
अफगानिस्तानमा तत्कालै ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता आवश्यक
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो, अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर नलाग्ने
सर्वोत्तम सिमेन्टको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित
व्यवसाय नै नभएका युवकको ३७ करोड बढीको कारोबार !
पाल्पाको तिनाउमा एक महिलाको शव फेला
लामो समयसम्म लगातार खोकी लाग्नु फोक्सोको क्यान्सरको संकेत
झापामा ५ वर्षीया बालिका बलात्कृत